Heshiiska ay maanta ka doodayaan labada aqal ee Soomaaliya ma burin doonaa xeerkii doorashada? | Gaaroodi News
Qoraalka sawirka,Golaha Shacabka ee Soomaaliya
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho ay kulan gaar ah oo wadajir ah ku yeeshaan labada gole ee Baarlamaanka Soomaaliya, si ay uga doodaan heshiiskii doorashada ee dhawaan la gaaray, hasayeeshee waxaa la iswaydiinayaa halka uu ku dambayn doono xeerkii doorashada ee uu Golaha Shacabku meelmariyay.
Qoraalka sawirka,Madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada Soomaaliya
Waxa ay madaxdu ku heshiiyeen in doorashadu ay waqtigeeda ku dhacdo, hasayeeshee qodob ka mid ah qodobada lagu heshiiyay ayaa dhigayay in heshiiska la horgeeyo baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, sidaas daraadeedna maanta ayet xildhibaannadu ka doodi doonaan heshiiskaasi islamarkaana ay cod u qaadaan.
“Labadaas hab mid waa in sharcigii sharci ka dambeeyay la soo saaro oo lagu caddeeyo laguna qeexo in sharcigii hore ee mawduucaas maamuli jiray ama xukumi jiray meesha laga saaray, iyadoo si cad loogu sheegayo in xeerkii xeerkan ka horreeyay laga bilaabo maalinta xeerkani dhaqangalo la laalay, mowduucii uu xukumi jiray ama maamuli jirayna uu xeerkan cusub maamulayo, sidaas darted xeerkii hore meesha waa uu ka baxayaa,”
Qoraalka sawirka,Gudoomiyihii hore ee Maxkamadda Sare ee Soomaaliya, Ibraahim Iidle Sulaymaan
Habka labaad-na waxa uu Ibraahim Iidle Sulaymaan ku tilmaamay “Waa in si cad uusan xeerka u sheegin in mid ka horreeyay uu buriyay laakiin si dadban looga fahmayo, oo sida dadban ee looga fahmayo ayaa ah in isagoo aanan xeerkii hore baabi’in haddana axkaam ka soo horjeeda sharcigii hore uu sharcigan dambe jidaynayo, sidaas daraadeedna waxaa loo qaadanayaa in sharci-dajiyuhu uu jideeyay qodobo kuwii hore ka hor imanaya, macnaheedu kuwii hore looma baahna weeyaan.”
Garyaqaan Ibraahim Iidle ayaa ku doodaya in sharci la hayo aanan looga guuri karin shar la’aan, oo sharci kale oo kaliya ayaa meesha looga saari karaa sharcigaas jiray.
Heshiiska maanta labada gole ay ka doodayaan ayaa waxa uu Ibraahim Iidle sheegay inay tahay in lagu dhiso dastuurka iyo shuruucda dalka, sababtoo ah qodobka afraad ee dastuurka ayaa dhigaya “In dastuurka uu hagayo hal abuurka iyo go’aannada siyaasadeed ee qaybaha dowladda oo dhan.” “Taas ayaa waxa ay ka dhigaysaa in heshiiskaas uu noqonayo mid dastuurka hareermarsan haddaanan meel uuun laga soo galian.” ayuu yiri Ibraahim.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, garyaqaan Ibraahim waxa uu sheegay in xeerkaas uu sii jiri doono, haddii heshiiskan la meelmariyana uusan burinayn xeerkii doorashada.
XIGASHADA SAWIRKA,RADIO MUDISHO
BBCda ayey waqtigaas u sheegtay in dikumintiga uu Golaha Shacabka ka dooday uu ahaa midkii saxda ahaa ee gudoomiyaha Aqalka Sare uu dan kale leeyahay